Body Gospel ndiyo Iyeyo PASI $ 24.98 (Pasi Pari $ 79.90) Kwekanguva Chidiki! - Fitness Rebates
musha » DVD » Body Gospel ndiyo Iyeyo PASI $ 24.98 (Pasi Pari $ 79.90) Kwekanguva Chidiki!
Body Gospel ndiyo Iyeyo PASI $ 24.98 (Pasi Pari $ 79.90) Kwekanguva Chidiki!
Kubudirira Kwemagariro Kunoita Kuve neFitness DVD Deal
Body Gospel Only $ 24.98 Plus $ 7.95 yekutumira nekubata
Kazhinji Sells ye $ 79.90. Kushanda Nguva Nguva Yokupa
BATSIRA MWEYA WENYU. Shandura BHUKU RAKO.
Each Body Gospel® Workout inotanga nemunyengetero, zvino inokutambidza kuenda kune imwe evhangeri yemufaro. Iyi yakazara purogiramu yemhuri inobatanidza kutenda, kufanana, uye chikafu kuti uwedzere kutenda kwako uye uchinje hutano hwako. Munguva pfupi, iwe uchaona uye unonzwa unofadza zvibereko.
- Tora Zvino uye tora a FREE FREE Kuratidza Kuendesa * -
$ 15.00 kukosha-uye tora yako mune 3 chete kune 5 mazuva ebhizinesi!
* Upgrade inoshanda chete kuUnited States, kusina
Bonus: Gamuchira 3 FREE zvipo kuti uchengete chete kuedza Body Gospel
Bonus #1 - Stepping in the Spirit: An inspirational walk workout set to uplifting gospel hits. Donna anokukurudzira humwe nhanho yenzira kusvika kuhutano hwako hwekurasikirwa kubudirira neiyi 20-minute
Bonus #2 - 3-Day Jump-Start Plan: Dzorera kusvika ku 3 pounds uye 3 masendimita mumazuva 3 chete nehurongwa hwakachengeteka asi hunobudirira-kutanga. Mhinduro dzako dzakavimbiswa
Bonus #3 - Body Gospel LIVE !: I "sangano nechinangwa" uye iwe wakokwa! Inzwa simba rekushanda pamwe neevhangeri yakararama choir mune imwe nzvimbo yekugara. Nekushanda uku, kufara-kuzadzwa kwakazara, iwe uchange uchinge uchiputika mumweya mukati
Kuita kunoshanda sekufanana kwe5 / 7 / 13 3: 17 AM EST. Mitengo yakarurama seyenguva / zuva yakanyorwa uye inogona kuchinja
Dai 7, 2013 FitnessRebates DVD No Comment	Gospel evhangeri $ 24.98, vhangeri remuviri $ 25, Kubvumidzwa kwevhangeri yepanyama, evhangeri evhangeri, Vhangeri vhangeri vanorarama chipo chebhonasi, Basa reEvhangeri rekushanda, kutenda uye fitness DVD, kuenderera mberi pakudzidzira mudzimu
Tenga 1 MuscleTech Hydroxycut Hardcore Elite, 100 Rapid-Release Thermo Caps & Get 2 FREE! Kurumidza Pakupa Zvokupedzisira!